Sandra Aza: «Unyanzvi hweprose huripo mukupenda nemavara» | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Sandra Aza's profile pa Twitter.
sandra aza, gweta kwemakore efemu ine mukurumbira yemagweta, akasiya zvese kwezuva kuti anyore and with Ropa rinotaura nhema, nhoroondo yenhoroondo ine zvisaririra zvevatema, yakasaina a kubudirira kutanga. Muizvi hurukuro huruSenge rinenge rimwe bhuku, anotiudza zvinhu zvakawanda nezvevanyori vaanofarira uye mabhuku, zvinokonzeresa uye mapurojekiti, uye chiono chake chekuburitswa uye mamiriro enharaunda. Ndinonyatsokoshesa nguva uye mutsa makatsaurira.
SANDRA AZA - KUKUNDA
SANDRA AZA: Ini handicharangarira bhuku rekutanga randakaverenga uye nei ndisingazive. Zvichida haina kuwana midzi mandiri kana pamwe mubvunzo haurarame mumidzi, asi mudhiramu, nekuti ndinotya kuti yakawanda yakawanda yematsutso yatove yero muti uyu uye kukanganwa kunotanga kubvunza kutapira kwezviyeuchidzo zvangu.
Ini ndinorangarira, zvakadaro, ndakazvipira kubasa ra Enid Blyton: vashanu, Malory Towers, Santa Clara, Naughty Elizabeth o Zvakavanzika Zvinomwe. Ndakaifarirawo Puck, ivo Lisbeth Werner, uye iyo hafu yebhuku hafu ye comic bhuku naBruguera: Unganidzo Nhau Sarudzo. Yakavadya vese uye haina kumboguta. PaReyes kana mazuva ekuzvarwa ndaingokumbira mabhuku uye Mugovera wega wega mangwanani ndaitsvaga mumwe munhu kuti andiendese kuCalle Claudio de Moyano, anonyanyo kuzivikanwa muMadrid seCuesta de Moyano uye ane mukurumbira nemastands ayo emabhuku ari kutengeswa.
Basa rinonetesa remugovera rekufamba-famba mumatanga apo ini ndaitsvaga mumadhirowa ndichiedza kusarudza iro bhuku rimwe iro mukuru wangu aida kutenga kwandiri raimbodzokera baba vangu uye, kwenguva, in hama yangu inodikanwa Manolo, uyo, chizvarwa cheMurcia, aiita basa remauto muguta guru. Pakupera kwevhiki asina kupihwa imba yake, aipedza husiku pamba uye, pachinzvimbo chekutsaurira zororo rake kune mamwe mainishuwarenzi anokurudzira, akazvipa mukuda kwemuverengi hama yake diki. Pamwe bhuku rekutanga randakaverenga harina kusiya mucherechedzo mundangariro dzangu, asi vakaita iwo mafaro ekunyora ekuverenga andakapihwa nababa vangu nemunin'ina wangu Manolo.
Kana zvakadaro tsamba dzangu dzekutanga, Ndinovarangarira zvakanaka. Yaiva nyaya yakanzi Bhiriji redenga uye vaitenderera musikana uyo aigara papurazi munzvimbo iri kure uye iri yega. Mukusabvumidza shamwari dzevanhu nzvimbo yakavanda yakadaro, akavatsvaga mu mhuka Kingdom uye akaisa pavari mazita avo mukutsanangura kwaasina kuisa zvakanyanya kufungidzira. Kune ayo shamwari yepamwoyo akamudaidza Bhiza uye hazvidiwe kusvina mashiripiti ekufungidzira kuti yaive mhuka ipi.
Rimwe zuva Bhiza akafa. Akaputsika neshungu, musikana akabvunza baba vake kana mhuka dzakaenda kudenga rimwe chetero nevanhu uye, baba vacho pavakazviramba, vachitaura nezvematenga maviri, rimwe revanhu uye rimwe remhuka, rakaparadzaniswa negungwa, akafunga kuti kana ndaive ndakura ndaizove mainjiniya uye aigona kuvaka zambuko anokwanisa kununura gungwa. Ichokwadi kune kugona kwake kwekubhabhatidza, aizoidaidza kuti "zambuko redenga" uye, kana munhu wese achigara munzvimbo dzavo dzakasiyana, aiyambuka zuva nezuva kushanyira shamwari dzake.
Handizive kuti sei, asi handina kumbokanganwa izvozvo, nyaya yangu yekutanga.
SA: Yakanga isiri imwe, yaive maviri: Nyaya isingaperi, naMichael Ende, uye Ishe wemhetenaJRR Tolkien.
Ndakapihwa Nyaya isingaperi pazuva rangu rekuzvarwa regumi uye ndinorangarira yakawanda sei Ndakafadzwa nechiono cha Áuryn pane peji rekuvhara; Muchokwadi, pane kundifadza, zvakandiyeva, zvekuti kubva pakutanga ndakaona kuti nyaya iyoyo yaigona kuzogara isingagumi mundangariro dzangu, nekuti handaimborega kuiburitsa.
Uye anga asina kukanganisa, sezvazvakaitika nenzira iyoyo. Ini ndaifadzwa neBastian uye Atreyu's red-green adventure; Ndakavhunduka nemufananidzo weFungidziro yakatyisidzirwa naHapana chinhu nekuda kwekuparara kwengano yemunhu, uye ndakashungurudzika chose ndichifungidzira Artax achikundwa muMahope eShungu apo Atreyu akazevezera munzeve yake «Ndichakutsigira, shamwari; Handibvumire iwe kunyura. Rwendo rwaAtreyu, yakatemerwa chete kutungamira Bastian kune yeUmwana Empress, zvechokwadi zvakandibata, uye akazviita nenzira yekuzvidzivirira nekufamba kwenguva, nekuti nanhasi uno unoramba uchindifadza.
Nezve Ishe wemhete, Ndakaiwana paKisimusi yangu yegumi nematatu. Ndakazvitanga nekumwe kusadaZvakanaka, yaive iyo bulkier bhuku kuti kusvikira zvino akange atarisana; kusada kuti, kure nekukura, kwakatanga kudzikira pandakangopinda muMiddle-pasi ndikadzidza nezveRin in charge "yekuvakwezva vese nekuvasunga murima uko maShadows anotambanudza: muNyika yeMordor."
Ameni kune vaviri vataurwa pamusoro apa, vapikisi vasina kupokana vekuunganidzwa kwangu kwe kindergarten, mamwe mabhuku mana akandikunda, aya madiro ayo, zvisinei, akatobuda kare mumakore ekukura.
Akangwara Gentleman Don Quijote weLa ManchanaMiguel de Cervantes. Chero kurumbidza kwakadururwa pachishamiso chakadai kunoita kunge kudiki kwandiri; Ini ndinozozvitenderedza nditaure kuti icho chikamu cheshoma boka remabhuku mune kuverenga kwake kwandinofanira kudzokorora nguva nenguva. Izvo hazvina basa kuti mangani nzendo kubva kuLa Mancha dzandakaita uye dzokororo kudivi remurume anokudzwa iyeye "mumwe weavo vane pfumo repamahombekombe, nhoo dzekare, nag ine ganda rakaomarara uye greyhound inomhanya. Ini ndinogara ndichiwana imwe nyowani nyowani munyaya kana munzira yekuzvitaura zvinondisiya ndichishamisika nekuyemura kwechokwadi.
Fortunata naJacintarakanyorwa naBenito Pérez Galdós. Imwe nganonyorwa yekubvisa ngowani uye chero zvinodikanwa. Uye, kune rombo rangu rakawanda, anoonekwa akapfeka mukare Madrid. Bhuku rakavhara zita uye tsamba mune zvinyorwa zvinyorwa zvemudiwa webere uye rake sitirobheri muti.
Mumvuri wemheporakanyorwa naCarlos Ruiz Zafón. Ndakaiverenga panguva yehusiku hwangu uye handimbofi ndakakanganwa kana mimvuri yemhepo idzo kana huni dzemwedzi iyoyo.
Iyo knight mune ine ngura nhumbinaRobert Fisher, bhuku diki rakakura izvo zvakandidzidzisa simba rekuporesa remisodzi.
SA: Miguel de Cervantes naBenito Pérez Galdós.
Iwo mabasa ese ari maviri akarongedzwa akafuridzwa canvases; Panzvimbo pekuverenga zviitiko zvavo, unozviona nenzira yakasimba zvekuti unonzwa uchifamba kupfuura chokwadi, uchimhara munzvimbo dzakafungidzirwa uye kuva chapupu chakaona chezvinoitika munzvimbo idzodzo.
Mukufunga kwangu, hunyanzvi hweprose hunogara mukupenda netsamba, uye hunyanzvi hwakadaro hwakakosheswa naCervantes naGaldós. Hazvishamise kuti wekutanga akadhirowa murume "akangwara", uye wechipiri akatanga basa rake rekugadzira kufarira brashi kupfuura peni.
AL: Ndeupi hunhu mubhuku iwe waungadai uchida kusangana nekugadzira?
SA: Ndingadai ndakafarira kugadzira nekusangana nevaviri vavanoumba Don Quixote naSancho, nekuti yekutanga inoyangarara pamusoro pemvura inopisa uye yechipiri inokwesha padombo rakaoma rechokwadi. Ipo Don Quixote achirota nezvehupenyu, Sancho anorarama achirota. Huviri uhwu hunotiratidza hupenyu sekubatanidzwa kweicho chaicho uye zviroto, nekuti, pasina zviroto zvaDon Quixote, chokwadi chaSancho chingadai chisingaite senge chaicho uye, pasina chokwadi chaSancho, zviroto zvaDon Quixote zvaizorasa mashiripiti avo.
Ino pamberi pekudyira imire pasi uye ichitungamira mumakore ihwohwo hupenyu, vanhu vakasarudza kurarama ne concave kana convex miromo. Uye uku ndiko kusiyana kwevanhu, nekuti, nepo vamwe vachiona zvigayo zvakawanda uye vachidzivirira vachikwenya mapendekete nekuzvikwanira kutyora mugwagwa, vamwe vanoona uto rehofori uye, panzvimbo pekuvadzivirira nekutyora mugwagwa, vanovarwisa kutyora mapfumo.
SA: Pandinonyora, ndinoda kuzviparadzanisa yenyika yangu, nekuti, zvikasadaro, ini handikwanise kuzvinyudza mune izvo zvevatambi. Pandakaverenga, tembere zvirevo. Ini ndinongoda imwe chete gumbeze, UN pasofa uye zvakakosha: bhuku rakanaka.
SA: Ini ndinogara ndichinyora mune yandinosheedzera panic kona ", one rakekuda kubva mumba mangu uyo wandinoda uye wandinovenga zvakaenzana. Mariri ndakapedza mazuva mazhinji uye pasina mwedzi mishoma; Ndakachema, ndikaseka, ndaputsa, ndapora; Ndakarara, ndakarota, ndakamuka, ndakadzokera kunorara uye ndakarota zvakare. Tucked ipapo, chiuru nguva ini ndaifunga kukanda tauro, asi yaive chiuru uye kamwe chete izvo, panzvimbo pekukanda tauro, ndakadhonza willpower. Ndingatadza sei kumuda uye kumuvenga panguva imwechete kana mukati memadziro ayo mana ndainzwa kuti chete fivhiri yekunyora ingandiporesa?
AL: Chii chatichawana munhoroondo yako yazvino, Ropa rinotaura nhema?
SA: Uchawana imwe chiito chinokurumidza yakashongedzwa ushamwari, mhuri, kupona, kurwisana, rukudzo, zhinji anoseka nevamwe misodzi... Uchamhanyira mu Bvunzurudzo, pamwe neInclusa, ne kutenderera kwechingwa nezai; iwe unoshanyira iyo makuhwa eVilla uye iwe uchanakidzwa nemakuhwa eanopenga eMadrilenians; uchafamba mumigwagwa kuti kana vambotsika Cervantes, Lope, Gongora, Quevedo, Tirso de Molina, Calderon, uye iwe uchaperekedza esportilleros, vatakuri vemvura, machira ekugezesa, vatengesi vemadhorobha, vatengesi uye masangano asingaverengeki akatomiswa nekuda kweruzivo rwemazuva ano.
En Ropa rinotaura nhema muchasangana iyo Madrid yemuna 1621; pane kudaro, hausangane neMadrid iyoyo, uchazviwana uri mairi uye, kana izvozvo zvikaitika, pfungwa dzako shanu dzinozoitwa.
Ipapo iwe uchaona mavara eakare Madrid, uchanzwa hwema hwayo, ucharavira kunaka kwayo, uchanzwa kupenga kwayo kusingaperi, uye uchabata makona ayo. Uye, apo njere dzako shanu dzinowedzerwa, pachave nechitanhatu chinogona kudzikira: icho cheatarisiko, nekuti iwe uchaona kunyudzwa kwakadaro muVilla neCorte zvekuti iwe unozorasikirwa nhanho dzako mune ino uye iwe uchaenda kune zvakapfuura ... kune ine hupenyu uye panguva imwechete yakasviba yakapfuura umo, nepo kutenda muna Mwari kwakabatidza moyo, mhosva dzakapokana nayo dzakabatidza mwoto.
SA: Ini ndinonyatsoda iyo nhema nhema, asi ini ndinobvuma kuti nhasi yezvakaitika kare inobata bhokisi remachinda ezvangu zvakabatanidzwa.
SA: Ndakagara ndichirota zvekunyora nhoroondo yenhoroondo uye ndakabudirira. Zvinoitika, zvakadaro, kuti hapana munhu akandiyambira kuti zvimwe zviroto zvinogona kupindwa muropa sei, nekuti izvozvi ndinofanira kunyora imwe ... uye ndiri pairi.
Kana zviri zvekuverenga kwangu ikozvino, ini ndichangopedza Rwendo rwakava ngano, ivo Mireia Giménez Higon, ane zano rinotenderera nerwendo rwunoitwa nemusikana paanowana bhuku risinganzwisisike reganda rakazara nengano dzekare dzinoita sedziri kutaura nezvake. Iyo inonakidza nyaya uye yakanakisa zvinyorwa zvekuti ini handina kukwanisa kuisiya kusvika kumagumo.
Zvakare, ndine mamwe mabhuku maviri mune simba muverengi.
Madrilenian ngano dzekati, ivo Antonio Aguilera Munoz, one kusarudzwa kwenzendo dzakatenderedza Madrid uko, muchimiro chengano dzinodakadza, munyori anofumura zvakavanzika zveguta guru, makona ayo uyezve ngano dzayo. Opera prima neMatritense ane ruzivo anonyatso kufadza vanoda veMadrid uye avo vanoda kuziva nezvenhoroondo yayo.
Inki nzira, ivo John Cruz Lara. Abbey yeItaly, chinyorwa, mutengesi, uye fomula. Kufunga kunovimbiswa kwakarongedzwa neyakajeka kwazvo prose.
Iwo matatu ataurwa anoita kwandiri semabasa ekurudziro yepamusoro.
SA: Mune maonero angu, pane zviitiko zviviri zvekufunga nezvazvo: mupepeti uye wezvekutengesa.
Ndiri kuona iyo yekutsikisa nzvimbo seisina kuomarara nhasi kupfuura nezuro ndatenda akawanda ekuzvitsikisa-sarudzo; kwete zvakadaro zvekushambadzira, nekuti, kunyangwe zvisingaperi zvinyorwa zvinoverengeka zvinodzungaira pamusika vachiedza kuita nzira yavo, musika unongotsigira chete kufambira mberi kwevashoma.
Neraki, pasocial network kurwisa kusaenzana uku nekupa novice vanyori mukana wekusvika kuruzhinji. Zvirinani, ndizvo zvave chiitiko changu. Me Ndakawana rutsigiro rukuru mumablogi ezvinyorwa uye zvakare muvaverengi vanotaura kana kugovana kuverenga kwavo. Rutsigiro rwakadaro rwakandiratidza kuti, kupfuura rusvingo rwechina rweFacebook kana Instagram, kune vanhu vane hunhu hwevanhu uye hwepamoyo vanoda kubheja pamavambo nekutipa mukana.
Kukotamira kwangu kwekutenda, zvakanaka, kuhukama hunorumbidzwa hwevaverengi nevanoongorora. Nhoroondo yake ennoble tsika, kuzvimba mbiru dzezvinyorwa uye, sezvinei, zvinopa mvura kune vafambi veiri gwenga chena rakaoma repepa uye nhema dzetsamba, uko dzimwe nguva vanhu vanotambura nenyota huru.
Mazvita henyu, shamwari, nekudyara mambure kuti avhure maburi anotendera iwo mapeni echinyoreso kupinda muhupenyu hwako uye, pakupedzisira, muraibhurari yako.
SA: Handifunge iyo yazvino dambudziko nguva iri kuratidza kuve nyore kune chero munhu. Iyo inhanho yakaoma kwazvo iyo, kune rumwe rutivi, yakabvisa kunyemwerera kubva kumweya yedu uye kunyangwe kumeso kwedu, sezvo isu tisingakwanise kuipfeka nemask uye, kune rumwe rutivi, zvakatikonzera kuchema misodzi.
Zvisinei, ukuru hwomunhu hwakavakirwa pakukwanisa kwavo kugona. Hondo dzakawanda, denda, njodzi uye mamwe matambudziko akarova munhu munhoroondo uye hapana akakwanisa kusunga mufaro wake kana kuputsa mweya wake. Kwete pasina hushingi hunokura mukutarisana nedambudziko Uye, kunyangwe hazvo nyika yave kufamba nemumakungwa anotambudza zvakanyanya, ndine chokwadi chekuti ichaita sezvakaitwa nemadzitateguru edu: mumakara eushingi, vachimaka kubatana uye nekurohwa kwegungwa rakakura uye, pamusoro pezvose, vakabatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Sandra Aza: «Unyanzvi hweprose huripo mukupenda netsamba»
Victor Manuel Fernandez. akadaro
Sandra Aza muchimiro chayo chakachena, chinyorwa chinoshamisa icho chinokatyamadza zvakadzama uye chimiro kana uchifunga izvo zvaari kuwana nebasa rake rekutanga.
Pindura kuna Victor Manuel Fernández.
Jose Manuel Mejia Esteban akadaro
Sandra, chirevo chakaisvonaka sezvawakaratidzira zvakare mune yakasarudzika uye yakakosha bvunzurudzo. Ini ndinokuvimbisa, zvine mwero, ramangwana rine zvibereko mundima yekunyora uye ndingafarire kuti hauzive kuti sei, kubva nhasi, iwe ukaenderera mberi nekutungamira boka revanyori vatsva vakasimudza zvombo zvavo izvi zvakaipisisa 2020 kurwisa kuvharirwa, kutya uye kusaziva midhiya. Makorokoto shamwari.
Pindura José Manuel Mejía Esteban
Sandra Farias Rojas akadaro
Zuva rakanaka! 😀😀😀
Anoshamisa bvunzurudzo inotiratidza chimwe chinhu pamusoro pemunyori uye zvaari zvekunyora. Ropa rinomhura, nyaya inokuratidza iyo Madrid yegore rapfuura. Ini munguva pfupi ndoda kuve nayo mumaoko angu kuti ndinakirwe, zvakanyanya kana kupfuura kupfuura iye munyori chaiye. Ndiri kuonga nekugona kuverenga iwe namesake. 😘😘😘😘
Pindura Sandra Farías Rojas
Letty wekuMagana akadaro
Sandra anogara ari wepakutanga, saka iye nemanzwiro ake kana achitaura nezve hupenyu hwake semunyori izvo zvinogara zvichipesana uye zvichitishungurudza. Ndinokushuwira zvakanaka! Makorokoto anowira pasi ...
Pindura kuna Letty de Magaña